Warshadda Shiinaha ee jilicsan ee PVC Coasters iyo soosaarayaasha | SJJ
Isticmaal Coasters -ka jilicsan ee PVC si aad u ilaaliso miiskaaga iyo miiskaaga iyo koobka. Tani waxay noloshaada ka dhigaysaa mid raaxo iyo dhadhan fiican leh. Xeebaha waxaa inta badan loo adeegsadaa baararka, Xafladaha, qoysaska iyo xafladaha. Waxaan had iyo jeer ku samaynaa Coasters -ka PVC jilicsan, silikoon, Bir, alwaax ama ikhtiyaarrada waraaqaha. The Coasters PVC jilicsan waa t ...
Isticmaal Coasters -ka jilicsan ee PVC si aad u ilaaliso miiskaaga iyo miiskaaga iyo koobka. Tani waxay noloshaada ka dhigaysaa mid raaxo iyo dhadhan fiican leh. Xeebaha waxaa inta badan loo adeegsadaa baararka, Xafladaha, qoysaska iyo xafladaha. Waxaan had iyo jeer ku samaynaa Coasters -ka PVC jilicsan, silikoon, Bir, alwaax ama ikhtiyaarrada waraaqaha. Coasters-ka jilicsan ee PVC ayaa ah kuwa ugu caansan sababta oo ah dabeecadda ka-hortagga biyaha. Si aad u qabato koob, galaas, ama koob dareere leh, Coasters -ka jilicsan ee PVC waxay ka fogaan karaan inay qoyaan oo jebiyaan waqti gaaban. Qalabka PVC ee jilicsan ee dabacsan, Coasters -ka PVC ee jilicsan ma jabi doono haddii ay dhacdo in miinadu ka soo degto miiska ama miiska. Coasters -ka PVC ee jilicsan ayaa ku habboon in lagu dhejiyo sumadahaaga midabada leh dhinacyada hore ama gadaasha, oo leh dhalanteed, debossed, midab buuxiyey, daabacan ama geedi socod farsamo oo xardhan. Coasters -ka jilicsan ee PVC wuxuu noqon karaa hal naqshad, 2 gogo ', 3 gogo' ama tiro kasta halkii go'an ee xirxirida.
Coasters -ka jilicsan ee PVC waa kuwo raqiis ah oo leh tayo sare, midabyo midab leh, iyo naqshado muuqda, aad bay ugu fiican yihiin dhiirrigelinta ama xusuusta si ay u ilaaliyaan muddo dheer. Qaababka guud ee Coasters -ka jilicsan ee PVC waa goobaabin ama laba jibbaaran, cabirkoodu yahay 80 ~ 100 mm, laakiin qaababka iyo cabbirka aad codsanayso mar walba waa la heli karaa oo leh qaddar yar oo lacag ah. Coasters -kayaga jilicsan ee PVC waxaa lagu sameeyaa walxo PVC oo jilicsan oo bey'ad leh, waxaa lagu bixin karaa waqti gaaban qiimo macquul ah iyo tayo sidoo kale.
Ujeedooyin: Dhimasho Dhimasho, 2D ama 3D, hal dhinac ama laba laab
Dhammaystirka: Dhammaan noocyada kala duwan ee qaababka, Logos waa la daabici karaa, waa la xardhi karaa, Laser ayaa la xardhay iyo wixii la mid ah
Ikhtiyaarrada Lifaaqa Caadiga ah: Ma jiraan wax lifaaq ah ama la habeeyay
Hore: Qaboojiyaha Cable PVC ee jilicsan
Xiga: Calaamadaha Bacaha PVC ee jilicsan
Musmaarradii Dhaqdhaqaaqa Shimbiraha
Sanduuqyada Lacagta Dahaarka ah